Best Testosterone Enanthate (ule e) ụlọ ọrụ na-emepụta ntụ ntụ
/ ngwaahịa / testosterone / Testosterone Enanthate ntụ ntụ
Rating: SKU: 315-37-7-1. Category: testosterone
AASraw bụ ọkachamara ọkachamara nke Testosterone Enanthate ntụ ntụ nke nwere ụlọ nyocha onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nkwado, a ga-arụ ọrụ niile n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mma. Sistemụ ọkọnọ kwụsiri ike, ma azụmaahịa azụmaahịa na iwu n'ogbe bụ nke a na-anabata.
Testosterone Enanthate ntụ ntụ vidiyo
Raw Testosterone Enanthate ntụ ntụ isi agwa
Product aha: Testosterone Enanthate ntụ ntụ
Nọmba CAS: 315-37-7
Molekụla Formula: C26H40O3
Ọbara arọ: 400.6 g / mol
Testosterone Enanthate ntụ ntụ, nke a na-akpọkarị "Nnwale E ntụ ntụ".
Testosterone Enanthate bụ ụdị injectable nke testosterone ngwa ngwa ime. Ngwunye intramuscular miri emi, a na-ezube ọgwụ ahụ iji nye ntọhapụ testosterone na-adịgide adịgide n'ime ọbara maka ihe dị ka izu abụọ ma ọ bụ atọ. Iji nọgide na-enwe ọkwa physiological nkịtị nke testosterone na ọgwụgwọ nnọchi androgen, ndị na-eme egwuregwu na-akwado heptanate n'ịkwalite ike nke anụ ahụ na ike.
A na-ejikarị Testosterone Enanthate eme ihe na nyocha ụlọ ọgwụ iji dochie ọkwa nkịtị nke testosterone na ụmụ nwoke toro eto. Enwere ike igosipụta nke a na mfu nke libido, oke akwara na ike nkịtị na ume. A na-ejikwa Testosterone Enanthate na-agwọ cryptorchidism na igbu oge n'oge ụmụ nwoke na-eto eto na ọgwụ ndị na-enye aka mgbe ụfọdụ maka ndị inyom na-enweghị ike ịwa ọrịa cancer ara. A mụọkwara ụdị testosterone nke ọma na nnukwu ihe ịga nke ọma dị ka nhọrọ nchịkwa ọmụmụ nwoke. E gosiputara ntụtụ 446, 200 mg kwa izu iji belata mmepụta spam nke ọma, nke a ga-anabata na omume ahụike ọdịda anyanwụ. Taa, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke usoro ọgwụgwọ ọzọ, Testosterone Enanthate ka bụ ụdị testosterone kachasị mma n'ụwa.
Testosterone Enanthate bụ ụdị ntọhapụ ngwa ngwa nke hormone testosterone ga-abụ nke mbụ nnukwu / ogologo ester testosterone ụdị eji. Testosterone Enanthate bụ otu nnukwu ester base testosterone compound. Nke a bụ hormone testosterone synthetic dị ọcha nke nwere ester carboxylic acid jikọtara na Enanthate (enanthoic acid). Ester n'onwe ya na-ejikọta ya na hormone na otu 17-beta hydroxyl. Site na ijikọ Enanthate ester, nke a na-enye ohere ijikwa oge homonụ na-arụ ọrụ na oge ntọhapụ zuru oke. Ozugbo agbanyere ya, testosterone anaghị arụ ọrụ ruo mgbe ester malitere ịpụpụ na hormone ahụ. Mkpokọta nkewa anaghị eme otu mgbe kama na-enye ohere maka ntọhapụ nke homonụ na-arụ ọrụ n'ime ahụ nwayọ nwayọ. Ozugbo etinyere ya, a ga-enwe mmụba dị nkọ na testosterone n'ime awa 24-48 mbụ ka ịgba ọgwụ mgbochi ahụ gasịrị. Site n'ebe a, hormone ahụ ga-ekewapụ mgbe niile ma na-esi n'ime ahụ pụta. Site na oge ya, Testosterone Enanthate na-eburu ọkara ndụ nke ihe dị ka ụbọchị 8, nke ga-enye ohere maka ihe dị ka otu injection kwa izu 2 na nhazi ọgwụgwọ. Otú ọ dị, ụbọchị 7-10 ọ bụla ga-adị irè karị iji nọgide na-enwe nkwụsi ike.
Testosterone Enanthate ntụ ntụ iji
Intramuscular injection: na-emekarị 50-250mg oge ọ bụla, kwa 2-4weeks. Ọrụ mmekọahụ na-ebelata, 100-400mg oge ọ bụla, 1-2 ugboro kwa ụbọchị. Ọrịa na-eri nri, 100-200mg oge ọ bụla, kwa izu 3-4.
Testosterone Enanthate cycles na-abụkarị nke a bulking ma ọ bụ uka inweta ọdịdị, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike tinye n'ọrụ n'ụzọ a kapịrị ọnụ n'ụzọ na ịkpụ ma ọ bụ. abụba ọnwụ okirikiri. Maka inweta oke ma ọ bụ ịba ụba, Testosterone Enanthate na-arụkarị ọrụ na usoro ọgwụgwọ dị elu (na-abụkarị opekempe nke 500mg kwa izu), na n'ihi na ọ bụ steroid anabolic na ogologo ester nke etinyere na ya, ọ ga-egosipụta ogologo ndụ ọkara ndụ gburugburu. 7 - 10 ụbọchị, ya mere Testosterone Enanthate cycles na-emekarị maka oge nke 10 - 12 izu ma ọ bụ karịa.
Testosterone Enanthate ntụ ntụ ntụ ntụ
Testosterone enanthate bụ mmiri doro anya ma ọ bụ odo odo nke na-abịa na vial iko 5-milliter (ml). A na-agbanye ya n'ime akwara buttock kwa otu izu ma ọ bụ anọ. Iji zere nnukwu mgbanwe na ọkwa hormone, na mgbanwe ọnọdụ uche nke nwere ike iso ha, a na-ejikarị obere doses eme ihe n'ime obere oge.
Ọgwụ a na-arụ ọrụ, nke a kwụsịrị na mmanụ sesame, nwere ogologo oge ntọhapụ nke izu abụọ ruo atọ.
Usoro onunu ogwu nwere ike di iche site n'otu n'otu mana a na-eji ya dika ndi a:
hypogonadism nwoke: 50 ruo 400 milligrams (mg) kwa izu abụọ ruo anọ
Oge nwata nwoke na-egbu oge: 5 ruo 200 mg kwa izu abụọ ruo anọ, maka ọnwa anọ ruo ọnwa isii.
Ọrịa ara metastatic: 200 ruo 400 mg kwa izu abụọ ruo anọ
Usoro ọgwụgwọ homonụ transgender: 50 ruo 200 mg kwa izu ma ọ bụ 100 ruo 200 mg kwa izu abụọ.
Testosterone Enanthate ntụ ntụ ndụmọdụ na-ekpo ọkụ
Inweta testosterone enanthate na oke doses karịa ka enyere ya nwere ike ibute mmegbu ma ọ bụ iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Nke a nwere ike ịkpata mmetụta dị njọ, dị ka nkụchi obi, nkụda mmụọ, ọrịa strok, ịda mbà n'obi, ịhụ anya, na aghụghọ. Were ọgwụ ahụ dịka onye na-enye gị nyere gị iwu ka ọ gbochie ihe ize ndụ nke mmetọ.
E kwesịghị iji Testosterone enanthate mee ihe maka ahụ ike ma ọ bụ imeziwanye ikike egwuregwu gị n'ihi ihe ize ndụ nke mmetụta dị njọ site na mmegbu. FDA kwadoro ọgwụ a naanị maka ọgwụgwọ nke testosterone dị ala na oge ntozu nwa nwoke na ọrịa ara ara na ụfọdụ ụmụ nwanyị. Were testosterone enanthate dị ka onye na-eweta gị nyere gị iwu.
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị na-ewere testosterone enanthate maka ọrịa kansa ara, ọgwụ ahụ nwere ike ime ka mmepe nke njirimara nwoke, dị ka imewanye ụda olu, ihe otutu, enweghị oge ịhụ nsọ, na ọtụtụ ntutu isi na ihu na ahụ. Iji gbochie nke a ịghọ nke na-adịgide adịgide, kwụsị ọgwụ ahụ mgbe mbụ ị hụrụ njirimara ndị a. Gị na onye na-ahụ maka gị kparịta ụka ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere mmetụta nke a.
Testosterone enanthate nwere ike ime ka mpaghara ara na ụmụ nwoke buru ibu, na-egbu mgbu ma ọ bụ dị nro. Nke a nwere ike ịga n'ihu n'oge ọgwụgwọ na testosterone enanthate. Mee ka onye na-ahụ maka gị mara ma ọ bụrụ na nke a na-enye gị nsogbu.
Testosterone enanthate nwere ike belata shuga ọbara gị. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ị nwere ike ịdị mkpa ka ị na-enyocha shuga ọbara gị ugboro ugboro mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Jide n'aka na ị maara ka esi amata na ọgwụgwọ shuga dị ala. Gwa onye na-ahụ maka gị okwu ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga ma na-enwe mgbaàmà ọ bụla nke ọbara shuga dị ala, gụnyere ịma jijiji, ọsụsọ, nkụchi obi ngwa ngwa, na mgbagwoju anya, n'ihi na ị nwere ike ịchọ mgbanwe na ọgwụ gị.
Testosterone enanthate nwere ike belata ọnụ ọgụgụ spam gị, nke nwere ike imetụta ikike ị nwere ịmụ nwa. Nke a yikarịrị ka ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-eji oke doses nke testosterone enanthate na enwere ohere mmetụta ndị a nwere ike ịdịgide adịgide. Mee ka onye na-enye gị mara ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmụ nwa tupu ịmalite testosterone enanthate.
A na-atụ aro ka ị chekwaa testosterone enanthate na ụlọ okpomọkụ. Gbaa mbọ hụ na ị nyochaa vial tupu ịgba ọgwụ mgbochi maka ihe ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe na agba. Ọ bụrụ na ị na-ahụ kristal na vial, kpoo ma jiri nwayọọ tụgharịa vial n'etiti ọbụ aka gị iji gbazee kristal ndị ahụ.
Ntụziaka 250mg/ml nkịtị maka 100ml Enweghị BB
25 gram Testosterone Ethanate ntụ ntụ (18.75mL)
76.25 ml mmanụ
Ntụziaka 250mg/ml nkịtị maka 100ml Ọ dịghị BB #2
78.25 ml mmanụ
Ntụziaka 250mg/ml nkịtị maka 100ml
69.25 ml mmanụ
Ntụziaka 300mg/ml nkịtị maka 100ml
30 gram Testosterone Ethanate ntụ ntụ (22.5mL)
60.5 ml mmanụ
(ga-arụkwa ọrụ ruo 350mg, ikekwe ọbụna karịa)
Ntụziaka 400mg/ml nkịtị maka 100ml
40 gram Testosterone Ethanate ntụ ntụ (30mL)
48 ml mmanụ
ịzụta testosterone Enanthate ntụ ntụ
Enwere ọtụtụ ndị na-eweta Testosterone Enanthate dị na ntanetị na ụlọ ahịa anụ ahụ gburugburu ụwa. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịkpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ọgwụ dị elu nke ga-eme ka ị nweta nsonaazụ dị mma site na njedebe nke usoro gị. Ọ bụghị ọ bụla testosterone enanthate emeputa ị na-ahụ online bụ ezigbo, ụfọdụ na-dị nnọọ n'ebe na-eme ka ego, na ha adịghị eche banyere ihe ị ga-enweta mgbe ewere gị dosages. Tupu ịzụta testosterone enanthate, buru ụzọ mee nyocha gị. Jide n'aka na ị ghọtara otú testosterone enanthate supplier si arụ ọrụ tupu ị mee ihe ọ bụla. Gụọ nyocha ndị ahịa dị iche iche yana ilele ọkwa ụlọ ọrụ.
Anyị bụ ndị na-eduga testosterone enanthate soplaya na emeputa na mpaghara. Webụsaịtị anyị bụ enyi na enyi, yabụ ị nwere ike iji ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ desktọpụ gị mee ka ọ dị mfe site na ntụsara ahụ nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Anyị na-ahụ mgbe niile na anyị na-ebuga ngwaahịa niile n'ime obere oge enwere ike. Ị nwere ike ịzụta testosterone enanthate ntụ ntụ na nnukwu ma ọ bụ dị nnọọ ezuru gị bulking ma ọ bụ ịcha cycles. Cheta, n'agbanyeghị otú ị nwere ike isi nweta ọgwụ ahụ n'ụzọ dị mfe, amalitela ịṅụ ya na-enweghị nduzi dọkịta gị.
 Irwig MS (Eprel 2017). "Ọgwụgwọ Testosterone maka ụmụ nwoke transgender". Lancet. Ọrịa shuga mellitus & Endocrinology. 5 (4): 301–311 . doi:10.1016/S2213-8587(16)00036-X. PMID 27084565.